नाकाबन्दी सम्झदै सुष्मालाई श्रद्धाञ्जली
नेपाल लाइभ बुधबार, साउन २२, २०७६, १९:४४
काठमाडौँ- पलभरमै भारतीय संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गर्दै नरेन्द्र मोदीको सरकारले हिमाली राज्य जम्मू-काश्मीरको विशेष स्वायत्त अधिकार खोस्यो।
त्यसको केही घन्टामै मोदीको पहिलो कार्यकालकी एक हस्ती सुष्मा स्वराजले लेखिन्, ‘प्रधानमन्त्रीजी तपाईलाई हार्दिक अभिनन्दन। म जीवनमा यही दिन देख्ने प्रतिक्षा गरिरहेकी थिएँ।’
ट्विटरमार्फत् काश्मीरमाथि मोदी सरकारले चालेको कदमको प्रशंसा खुसी छल्काएको केही घण्टामै उनको निधनको खबर छरपस्ट हुन पुग्यो। ६७ वर्षको उमेरमा मंगलबार राति उनले यो भौतिक संसार त्यागेर गइन्।
मृगौलाको समस्यालाई उनले सन् २०१६ मा प्रत्यारोपन गरेर जितिरहेकी थिइन् तर मंगलबार रातिको हृदयघातलाई भने उनले जित्न सकिनन्। त्यो ट्वीट नै अन्तिम बन्यो उनका लागि।
सायद उनलाई दुखी हुँदै यो भौतिक संसार छाडेर जानु परेन। उनी त्यही सुनेर गइन् जुन सुन्न चाहन्थिन्। उनी त्यही देखेर गइन् जुन देख्न चाहन्थिन्।
सन् ९० को दशकतिरै उनी आफ्ना भाषणमा खुलरै भन्थिन, ‘हो, हामी साम्प्रदायिक हौं किनकि धारा ३७० खारेजीको माग गर्‍यौं। हो, हामी साम्प्रदायिक किनकी हामीले विकृत धर्मरिपेक्षताको अन्त्य गर्ने कुरा गर्‍यौं।’
स्वराजलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै भारतका लागि नेपालक राजदूत निलाम्बर आचार्य।
दशकौंदेखिको आफ्नो सपना मोदीले पूरा गरिदिएपछि ट्विटरमा त्यो सन्तोष पोखिन्। सायद उनको प्रस्थान आँसुमय नभइ हर्ष आँसुमय भयो।
नाकाबन्दी सम्झदै श्रद्धाञ्जली
सुष्मा स्वराज अब्बल क्षमता भएकी राष्ट्रवादी भारतीय राजनीतिज्ञ हुन भन्ने सिद्ध जस्तै छ। राम्रो वाककलाका कारण निकै प्रसिद्धि पाएकी उनका नाममा भारतीय राजनीतिक धेरै रेकर्ड अंकित छन्।
मृत मान्छेको उछितो काड्नु हुन्न भन्ने पूर्वीय संस्कृतिको विशेषता हो। त्यस्तैले नेपालबाट पनि एउटा छिमेककी नेताप्रति श्रद्धाञ्जली जनाइए। राजनीतिज्ञदेखि नागरिकसम्मले स्वराजको निधनमा दुःख मनाउ गर्दै उनको हार्दिकता सम्झिए।
तर, बिर्सिएनन् एउटा हितैसी छिमेकीले लगाएको नाकाबन्दी र उनी त्यसको प्रभावशाली ‘एक्टर’ भएको कुरा।
स्वराजको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जलीस्वरुप पुष्पगुच्छा अर्पण गर्दै मोदी।
आफूलाई भाइ भनी बोलाउने र छिट्टै आत्मीय बनेको स्मरणसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको समेवदनामा थुप्रै नागरिकले प्रतिक्रिया जनाए-निधनबाट दुखित छौं तर नाकाबन्दी बिर्सिएका छैनौं।
पूर्व विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको निधनमा नेपाल कम्युनिस्ट, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायका राजनीतिक दल तथा तिनका नेताले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्।
तुलनात्मक रुपमा स्वराजको नेपालसँगको ‘इन्गेजमेन्ट’ पछिल्लो दशककै धेरै थियो। विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि ७ पटक त उनी नेपालको भ्रमणमा आइन्।
तर, दुर्भाग्य ‘इन्गेजमेन्ट’को आयतन जतिकै सद्भाव उनले नेपालीबाट बटुल्ने अवसर गुमाइन्। ०७२ को भुइँचालो जसमा घाइते नेपालीको तन र मनमा मलम लाउने प्रयास गरेको थियो उनको देशले। दुखको कुरा नेपालीलाई लागेको घाउ ओइलाउन नपाउँदै नुन छर्कियो छिमेकीले नाकाबन्दीमार्फत्।
भारत ‘बिग ब्रदर एटिच्युड' देखाउँछ भन्ने सदाबहार नेपाली गुनासो हो। यसलाई थाहा पाएकी उनी भन्ने गर्थिन्- बिग ब्रदर अहंकारी हुन्छ, एल्डर ब्रदर परोपकारी। भारत बिग हैन एल्डर ब्रदर हो नेपालको।
तर, नाकाबन्दीमा उनमा ‘बिग ब्रदर’कै एटिच्युड देखापर्‍यो। संविधान निर्माण जस्तो विशुद्ध आन्तरिक मामिलामा हस्तेपक्ष गर्न उनी विदेशमन्त्री हुँदा उनकै सरकारले दूत पठायो। दूतको कुरा नमान्दा नाकाबन्दी अघि सार्‍यो।
उनी आफैले भनिन्- बिना बहस दुई दिनमै संविधान पारित भयो। संविधानमा समावेशिताको कुरा खै? आफ्नै नागरिकलाई किन अनागरिक बनाउँदै छौं?
नेपाली मनले उनीमाथि समवेदना नजनाई रहन सक्दैन्। तर, बिर्सदैन- नेपालीको घाटी निमोठ्ने त्यो नाकाबन्दी।